Pejy fandokoana mahafinaritra Lalao Olimpika | Fanatanjahan-tena - Pejy fandokoana maimaim-poana
Pejy fandokoana ny Lalao Olaimpika
Mandrehitra lelafo Olaimpika
Lanonana fankalazana ny Lalao Olaimpika
Fankalazana ny loka tompon-daka Olaimpika
Ho fanomezam-boninahitra an'i Zeus, rain'ireo andriamanitra, dia nisy fety sy fifaninanana ara-panatanjahantena tamin'ny andro taloha izay tsy voafaritra mazava tamin'izany fotoana izany. Maherin'ny 192,24 metatra, izany hoe boribory iray amin'ny kianja, nampijaly ny tenany ireo atleta tamin'ny fifaninanana tsy ofisialy voalohany tamin'ny taona 776 talohan'ny nanombohan'ny androntsika ankehitriny. Tao anatin'ny taona vitsivitsy, fifaninanana hazakazaka hafa ary fifaninanana soavaly no nampiana.
Tamin'ny fitomboan'ny fitaomana nataon'ny Fanjakana Romanina tamin'izany fotoana izany dia nanomboka ny fihenan'ny lalao. Ny fandrobana ireo toerana Olympia sy Delphi no nahavitana ny sisa ary noho izany ny fifaninanana voasoratra farany tamin'ny andro fahagola dia natao tamin'ny 393 AD.
Ny herin'ny natiora toy ny fihotsahan'ny tany na ny horohorontany dia nahatonga ireo fotodrafitrasa ara-panatanjahantena teo aloha hanjavona tsy ho sarintany ary manjavona ny fahatsiarovana azy ireo. Sendrasendra dia hita indray i Olympia tamin'ny 1766 ary nanjary nalaza indray tamin'ny 1875 tamin'ny alàlan'ny fikarohana lava. Tonga ny fotoana tany Atena tamin'ny 1896 - ny Lalao Olaimpika maoderina voalohany no natao. Nanomboka teo, nankafy ny lazany ny lalao ary izy izao no hetsika fanatanjahantena lehibe indrindra eto an-tany. Raha atleta 250 avy amin'ny firenena 14 no nandray anjara tamin'ny fanontana vaovao taloha kelin'ny fiandohan'ity taonjato ity, ny isa tamin'ny Lalao Summer tao Rio de Janeiro tamin'ny fahavaratra lasa dia nahatratra 11.303 204 nahavariana avy amin'ny firenena XNUMX. Atleta maro no mamaritra ny fandreseny tamin'ny Lalao Olaimpika ho fotoana lehibe sy lehibe indrindra amin'ny asany.
Hatramin'ny 1924, ny lalao dia nilalao tamin'ny ririnina ihany koa ary tsy nitsahatra ny liana. Nalefa tany Chamoix, France ny basy fanombohana ary amin'ny volana febroary 2018 dia hiangona ao Pyeongchang, Korea Atsimo ireo atleta. Tamin'ny taona 1994 dia nanapa-kevitra ny Komity Olaimpika Iraisam-pirenena (IOC) fa hatao ny Lalao fahavaratra sy ririnina isaky ny roa taona.
Fito taona alohan'ny fitifirana, ny IOC, monina any Suisse, dia mamaritra izay tanàna mpangataka homena azy ny fifanarahana. Ny kandidà tsirairay avy dia tsy maintsy manao fampisehoana feno ary mahatanty ny fitsidihan'ny komity mba hahatratrarana ny fifidianana farany. Raha manana ny farany tsara kokoa ho anao ianao amin'izay, dia afaka manomboka ny fanavaozana sarotra sy fanitarana ireo toeram-panatanjahantena tsy tambo isaina - nefa tsy misy vola avy amin'ny IOC. Ny tanàna sy ny fanjakana no miantoka ny vidiny, izay indraindray miteraka fahasosorana eo amin'ny mponina. Raha ny momba ny tanànan'ny mpangataka maro, na izany aza, ny mety hisian'ny antso avo manerantany amin'ny Lalao Olaimpika dia mihoatra ny fandaniana ara-bola ary noho izany dia tsy dia misy ny vato ratsy.
Mba hanomezam-boninahitra ny fanahin'ny fahagola, volana vitsivitsy talohan'ny lanonam-panokafana, ny lelafo Olaimpika dia mirehitra amin'ny lanonana mihetsiketsika amin'ny alàlan'ny fitaratra parabola ary entina mankany amin'ny tanàna fampiantranoana amin'ny hazakazaka fampitana. Taorian'ny nananganana ny sainam-pirenena ary nilalaovana ny hiram-pirenena dia miditra amin'ny kianja lehibe amin'ny fotoana voafetra ireo atleta. Eo no tanterahina ny lanonana fizarana diplaoma aorian'ny roa herinandro mahery, saingy mazàna dia kely loatra izany.
Fankalazana ny loka Lalao Olaimpika
Memo milalao karatra modely lalao